Ọ Dị Ihe O ọ bụrụ Jesus Rose? — njem Lee - Official Site
Echetara m na-eto eto na ezinụlọ m ga-aga niile maka Ista. Anyị ga-aga nnukwu ụlọ ahịa otu izu tupu ma na-picture na Ista ewi. M na ya onwe-eche na bụ creepiest niile ezumike mascots. A gigantic oke bekee? Na nke ahụ traumatizing maka ụmụaka. Ọ bụghị nanị na, ma na ị na-gwara na ọ na-aga na-egosi gị n'ebe obibi gị n'elu izu ụka? Agbanyeghị na Ista, anyị ga-aga chọọchị, mgbe ahụ anyị ga-abịa n'ụlọ. Anyị na-eme a Ista egg ichu nta. Anyị ga-enwe ezinụlọ n'elu. Anyị ga-enwe obere Ista nkata na niile ụdị nke stof na e.
Na ọtụtụ n'ime anyị nwere ụdị akụkọ ahụ. My na-abụghị Christian enyi ọbụna nwere nnọọ ụdị akụkọ ahụ. All n'ime ihe ndị a emewo anyị na-eto eto na a omenala ebe anyị maara mbilite n'ọnwụ nke Jizọs bụ n'ụzọ ụfọdụ n'azụ ememe, ma ka ọtụtụ ọ bụghị n'ezie dị mkpa maka ememe.
Gịnị mere a Discussion dị mkpa
The ajụjụ anyị na-arịọ na-anwa ịza ajụjụ taa bụ: Ọ Dị Ihe O bụrụ na Jizọs n'ezie gebilite site nili? N'ezie ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ihe niile ị chọrọ ime bụ inwe Ista egg hunts. Nke nwere nnọọ ihe jikọrọ ya na Jizọs. Ma anyị niile chọrọ ihe karịrị nke ahụ ná ndụ. Echere m na nke a bụ nnọọ mkpa ajụjụ, na m na-eche na ọ dị mkpa ịjụ n'ihi na a ole na ole ihe mere.
1, Ụfọdụ n'ime-echeghị na ọ metụrụla. Ọtụtụ n'ime anyị tụlee mbilite n'ọnwụ nke mmadụ mgbe ọnwụ na-agaghị ekwe omume. Mgbe obi kwụsị, ọ dịghị ihe ndụ ga-ama. Ozu adịghị na-aga ọzọ. Anyị na mgbe hụrụ ya, ọ dịghị-akpa na iwu okike, na ọtụtụ na-eche obi ike na ọ bụghị ime. Ya mere, nke a bụ ihe dị mkpa na-eche banyere.
2, Ndị ọzọ n'ime anyị na-eche banyere ya dị ka adịghị mkpa. Anyị na-eche nnọọ banyere ya ma ụzọ. Ma eleghị anya, o mere, ma eleghị anya, ọ bụghị ya. Gịnị ka nke nwere na-eme na ndụ m mgbe nile. Enwere ike m ntị Jesus ụfọdụ ebe e mesịrị na ndụ m, ma n'ihi na ugbu a, m ezi. Ana m enwe fun, M na-n'ịbụ ndị a bụ ihe ndị ọhụrụ, Amụtala m na, Ana m agbalị ka ewu a ntọala ma ọ bụ a ọrụ. M n'ezie nchegbu banyere mbilite n'ọnwụ ugbu. Ma mbilite n'ọnwụ adịghị adịghị mkpa maka onye ọ bụla. Na I wanna-egosi na n'oge nkwurịta okwu anyị taa.
3, Ụfọdụ n'ime anyị na-eche nke mbilite n'ọnwụ akụkọ dị ka dị nnọọ inspirational. Ọ bụ ihe nnọchianya nke ebili n'elu ọnọdụ gị. Ọ bụ a mara mma akụkọ na nke ahụ weghaara uche ndị mmadụ nakwa n'obi ha n'elu ikpeazụ 2000 afọ. Ma eleghị anya, e nwere ihe a omume ka akụkọ, ma ọ dịghị ihe karịrị na.
Ihe mere m na-eche na nke a dị mkpa na-ekwu okwu banyere bụ n'ihi na ihe atọ nke ndị ziri ezi bụ dị iche iche karịa ihe Bible na-akụzi banyere mbilite n'ọnwụ nke Jesus. Ya mere, ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime anyị na-eche dị iche iche ihe banyere mbilite n'ọnwụ karịa Bible adịghị anyị kwesịrị ịjụ onwe ma ma ọ bụ na ihe. N'oge Ista bụ oké ohere nwere mkparịta ụka a.
Ọ bụrụ na nke a bụ otú anyị si ele mbilite n'ọnwụ mgbe ahụ na Azịza ya bụ ee, ọ dịghị mkpa. Ma ọ bụrụ na ị na-ama guessed, Na na na a Christian na m na-eche Jesus n'ezie wee si n'ili. Na ọ bụghị nanị na m na-eche na ọ dị mkpa, Echere m na anyị na-na na niile olileanya na-adịghị na-enweghị ya.
Mere m Chee enye anam
Achọrọ m nkenke na-agwa gị ihe mere m ji kwere Jizọs kpọlitere ndị nwụrụ anwụ. M gaghị na-eji a ton nke oge ndị a, n'ihi na nke ahụ abụghị nzube nke okwu a. The nzube n'abalị a bụ ikwu okwu banyere ma ma ọ bụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụrụ na m na-aga na-esi ọnwụ na o bilie n'ezie na-eme ka a na-ekwu dabeere na, M chọrọ ka unu mara ihe mere m kwere na ya.
1. The Bible na-emeso ya dị ka a Historical omume
Mgbe ị na-agụ Akwụkwọ Nsọ, -OZI adịghị emeso mbilite n'ọnwụ dị ka ihe ọ bụla na-erughị eziokwu. O doro anya na ha adịghị ewere onwe ha na-ede akụkọ ifo. Mgbe Ndịozi Kwusara Ozi Ọma okwuchukwu mgbe Jesus ọdọk n'ime Eluigwe, ha na-ekwu banyere ọnwụ nke Jesus (nke uncontested) na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs na otu ike. Dị ka ma ọ bụrụ na ha abụọ bụ ndị dị adị n'ezie.
Akwụkwọ Nsọ bụ doro anya na Jizọs n'ụzọ nkịtị si n'ọnwụ bilie. Na m kweere na Akwụkwọ Nsọ na-Okwu Chineke. Ekweere m na ọ nwere ike obi. Echeghị m na ọ bụ ma ọ bụ na-ezighị. Ahụ na otú ọ na-dere bụ ihe ị ga-ede ya ma ọ bụrụ na ị mere ya. Nke na-eweta m ka m ihe nke abụọ mere m kwere na mbilite n'ọnwụ mere.
2. M Ịtụkwasị Obi Pụrụ Ịtụkwasị Obi Àmà
Anyị niile na-anabata ihe na ndabere nke na-agba akaebe site n'aka ndị ọzọ. Anyị abụghị ndị na basketball game, ma anyị na-atụkwasị obi sports announcers ma ọ bụ enyi bụ ndị nọ n'ebe recap. Ị anaghị achọ ihe àmà ndị. Ị ịtụkwasị ha obi. Anyị Agbaghara klas, ma anyị tụkwasịrị obi ụmụ klas ruo on ha ndetu. Anyị abụghị ndị na Gettysburg adreesị, anyị na-enweghị ihe ọ bụla footage, ma anyị tụkwasịrị obi na ọ mere. Anyị tụkwasịrị obi na okwu ndị ahụ bụ ndị nke Abraham Lincoln.
Ugbu a, m maara ihe ndị a dị iche iche karịa mbilite n'ọnwụ, ma m na-ekwu na-ekwu, e nwere ihe ndị anyị kwenyere mere n'ihi anyị nụrụ ya si a pụrụ ịdabere na isi iyi. Ọ bụ a eke na ezi uche dị na ya ime ma ọ bụrụ na ọdịghị ihe na ya ịjụ ịtụkwasị ya.
The ndị na-ekwukarị banyere mbilite n'ọnwụ n'ime Bible, bụ dị ka m nwere ike ịgwa, pụrụ ịdabere àmà. Ọ dịghị ihe mere ka m kwụsị ịtụkwasị ha. N'ezie, e nwere ọtụtụ narị ndị ji anya nke huru Jesus. M nwere ike na-eche nke ọ bụla ikpe ebe 500 ndị ji anya ha agaghi-ezu iji gosi na a ikpe. Ekweere m na-agba akaebe bụ na-akarị ike na Jizọs ga-abụrịrị na bilitere site na ndị nwụrụ anwụ.
3. Ọ bụ Best Nkọwa nke Facts
The mmalite nke Christianity bụ akpali nnọọ mmasị. I otu nwoke onye Juu a mụrụ na Galili, na-ezi na a ọhụrụ ụdị ikike. ihe iriba ama. ekpokọta na-eso ụzọ. Na-na nsogbu ndị isi ndị Juu. A na-gbahapụrụ ya na enyi. na-gburu. Na mgbe ahụ n'ili ya na-hụrụ na-efu.
Na n'ụzọ ụfọdụ a nwoke, onye kwuru na ya ga-eme ịtụnanya things- na-achị, ibu eze, wughachi ụlọ nsọ na atọ days- ọ bụ ezie na ọ nwụrụ na-aghọ isi iyi nke a ije. The eso ụzọ gbahapụrụ ya. Ha we tua egwu ikwu ma n'ihi na ọ na-eyi ka hà soro ya n'efu. Ma mgbe ahụ, mgbe anyị na-agụ akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, anyị na-ahụ na ha na-na mberede ume na obi ike. Na njikere mkpagbu maka Jesus.
Ha na-akụzi na ọ bụ Chineke, ka a Jewish omenala, onye na-amata na Chineke bụ onye. Ha na-akụzi na ọ si n'ili bilie, na ha na-ezi ya adịghị anya mgbe ọ na-eme. Ya mere, ndị ka bụ ndị na gburugburu. Ọ bụrụ na ọ bụghị ime, ọ ga-squashed. Ndị ọchịchị nwere ike mechie ọnọdụ ahụ dum, nke bụ a egwu egwu ka ha, site nnọọ na-egosi ndị mmadụ ya ahu. The ije na-etolite, na-eso ụzọ Jizọs bụ ndị dị ọtụtụ. Ọtụtụ puku nnọọ anya mgbe. All ma otu n'ime ndị na-eso ụzọ iri na abụọ, -agwụ elu na-gburu n'ihi okwukwe ha nime Kraist. Gburu n'ihi na nwoke ahu. Ha bụ nnọọ n'aka, na-agba mbọ ka eziokwu ahụ bụ na ọ bụ Ọkpara Chineke, biliworo n'ọnwụ na ha na-gburu n'ihi na ọ.
Olee otú ị na-akọwa na? Echere m na nke kacha mma nkọwa nke ndị mere eme, bu na o na n'ezie mere si si n'ili. Amaara m na m ga-anwụ n'ihi a akụkọ mgbe na m mebere. Naanị ihe nwere ike obi sie ndị a nile, bụ na ọ we bilie.
Ya mere, n'ihi ọnọdụ ae, Achọrọ m ikwu site na ụfọdụ nke ibuana nke mbilite n'ọnwụ.
Ya mere, ihe ndị ọzọ oge, anyị Aga okwu banyere ajụjụ ahụ. Ọ Dị Ihe O ọ bụrụ Jesus gebilite site nili. M na-aga na-agwa gị ihe mere m na-eche na ọ dị mkpa. M na-aga ime ya site na-achọ na a onuuzo si Bible, 1 Ndị Kọrịnt 15. Na site na Itie, M na-aga na-egosi gị atọ ibuana nke mbilite n'ọnwụ.
na 1 Ndị Kọrịnt 15, Paul emeso mbilite n'ọnwụ bụghị nanị dị ka a mere eme, ma dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-pụtara bụ ọnwụ na ndụ.
Ndị a ihe atọ ndị dị oké mkpa n'ihi na ọ bụla otu n'ime anyị n'ime ụlọ a nke. Ha dị mkpa nye ọ bụla otu onye ndu. Na ị ga-ahụ ihe mere m kwere na na a oge. Ebe a bụ ihe Pọl na-ekwu:
Ma ọ bụrụ na e nweghị mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, mgbe ahụ na-adịghị ọbụna Kraịst a kpọlitere. Na ọ bụrụ na Kraịst na a kpọliteghị, mgbe ahụ nkwusa anyị bụ n'efu okwukwe-unu bu ihe efu. Anyị na-ọbụna hụrụ ka a misrepresenting Chineke, n'ihi na anyị gbara àmà banyere Chineke na ọ kpọlitere Kraịst, onye ọ emeghị ka ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ndị nwụrụ anwụ enweghị welitere. N'ihi na ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ enweghị welitere, ọbụna Kraịst a kpọlitere. Na ọ bụrụ na Kraịst na a kpọliteghị, okwukwe gị bụ ihe efu na ị ka na-na nmehie nile unu. Mgbe ahụ ndị na kwa, bụ ndị dara n'ụra Kraịst alawokwa n'iyi. Ọ bụrụ na Christ anyị nwere olileanya nanị ná ndụ a, anyị bụ nke mmadụ niile kwesịrị ebere karịa.
(1 Ndị Kọrịnt 15:13-19 ESV)
m. Ọ bụrụ na Jizọs emeghị ka, ọ dịghị Good News
Gịnị ka m bu n'obi mgbe o? N'ezie enwere ihe anyị mgbe ụfọdụ ebe a na ozi ọma na-ezi. Ma m na-ekwu kacha ozi ọma, Bible kpọrọ Oziọma. Nke bụ eziokwu bụ, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ihe ọma ndị meere na ozi ọma na ná ndụ anyị, ọbụna ihe ndị nwere ike inye anyị olileanya ruo nwa oge, dịghị nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ pụrụ inye anyị a na-adịgide adịgide olileanya.
A tax nkwụghachi ego apụghị inye anyị adịgide adịgide olileanya. Nnabata n'ime a gụsịrị akwụkwọ omume na-apụghị inye ys adịgide adịgide olileanya. Ihe njikọ aka ma ọ bụ alụmdi na nwunye, -apụghị inye anyị adịgide adịgide olileanya. All n'ime ihe ndị a ga-abịa na njedebe. Na ha nwere ike-anapụta n'aka anyị n'otu ntabi anya. Olileanya ọ bụla ọ na-ewe? È nwere olileanya na nke ahụ bụ eluigwe na ala na akwa?
The Bible bụ nnọọ ezi uche na-eme ihe n'eziokwu banyere ọnọdụ ụwa anyị. Anyị na-agbajikwa, anyị na ụwa na-agbajikwa, na ihe nile nke e kere eke kwesịrị ka a weghachiri eweghachi. Anyị maara na ụwa anyị a na-agbajikwa. Site ọdachi ọrịa. na mpụ. O yiri ka e nwere ihe a ọhụrụ uka agbapụ ụbọchị ọ bụla ugbu a. Kedu ihe na-aga? Brokenness.
Ọ bụghị naanị si n'ebe ezie na. Anyị niile na-agbajikwa kwa. The àmà nke a ná ndụ anyị bụ mmehie anyị, nchegbu anyị, anyị tiwara etiwa mmekọrịta, megidere ibe, na kasị njọ, anyị ikewapụ ya n'ebe Chineke.
Ị mgbe chere banyere ihe mere anyị ji ụzọ anyị na-? Gịnị mere n'agbanyeghị otú ike na anyị na-agbalị anyị apụghị zuru okè? Gịnị mere anyị na-eme ihe ndị anyị na-eme? Mere anyị ji nọgide na-echeta ndị ihe na-ewute anyị? Gịnị mere anyị na-eme ebibi mkpebi? Gịnị mere anyị were ndị ọzọ iwe? Anyị na-agbajikwa. Nke ahụ bụ akụkọ ọjọọ.
Jizọs bụ Onye ahụ Chineke zitere iji weghachi, na kpọmkwem na-agbaghara anyị Onye kere anyị. Nke ahụ bụ ozi ọma.
O doro anya na Christianity bụ ihe pụrụ iche n'etiti okpukpe ndị dị n'ụwa. Otu n'ime ihe ndị pụrụ iche ihe banyere Christianity bụ na ọ dabere na ihe ndị mere eme na a pụrụ iche n'ụzọ. E nwere ihe ụfọdụ na-n'ezie mere na anyị tụkwasịrị. Anyị atụkwasị n'ezie nwoke, bụ onye na-n'ezie gburu, ndị na-akpọlite ​​ndị nwụrụ. Na ọ bụrụ na ihe ndị ahụ abụghị ezigbo ndị, mgbe ahụ ozi ọma a Onye-nzọpụta abụghị eziokwu.
Muhammad onye amụma ndi Islam na okwukwe, bụ ihe nwụrụ anwụ. Alakụba mara ebe ozu-ya, ili ya bụ. Na a ọ dịghị ụzọ na-ebibi ahụ a Muslim okwukwe.
The Buddha kpọrọ ozu ya ọkụ mgbe ọnwụ, na e nwere ịkpọ ozu ọkụ onwunwe ndị e kesara dị iche iche ezinụlọ. Ya mere na anyị maara ebe ndị Buddha si ahu bu. Na na ọ dịghị ụzọ na-ebibi ahụ bụ onye Buddha okwukwe.
Confucius ozu elìe ya ebe a mụrụ na China. Otu pụrụ ikwu nke Joseph Smith, dị iche iche Pope, etc. Na eziokwu na ndị a na-akpa ọ dịghị ụzọ na-ebibi ahụ okwukwe nke ha na-eso ụzọ.
Ma ọ bụrụ na mmadụ bụ ịchọta ozu nwuru anwu nke Jesus, Christianity kwụsịkwara ịdị adị. Christian ụka bụ ndị na-enweghị isi. Christian nkwusa bụ ndị ụgha. Na-eso ụzọ Kraịst na-enweghị olileanya. N'ezie ma ọ bụrụ na ozu Jizọs adị ka a hụrụ, ndị ọchịchị ga-dị nnọọ gosiri ya ka ndị mmadụ na-skwọsh mgbasa nke okpukpe na-asọpụrụ nwoke. Ma, ihe m na-eme bụ na ọ dị mkpa.
Ihe niile bụ n'efu
Gee ntị n'ihe Pọl na-ekwu ebe a na 1 Ndị Kọrịnt 15. Tupu mgbe ọ ezo na Gospel ma ọ bụ Good News ka ihe kacha mkpa. Ọ na-ekwu na nke ahụ bụ ihe ọ kụziri ha, ha natara ya, na ha ugbu a na-eguzo ya. Ma gee ntị n'ihe ọ na-ekwu n'amaokwu 14.
"Ma ọ bụrụ na Christ na a kpọliteghị, mgbe ahụ nkwusa anyị bụ n'efu okwukwe-unu bu ihe efu. Anyị na-ọbụna hụrụ ka a misrepresenting Chineke, n'ihi na anyị gbara àmà banyere Chineke na ọ kpọlitere Kraịst. "
Paul ikereke ke mbilite n'ọnwụ bụ ụfọdụ inspirational akụkọ. Ọ na-eche na okwukwe na-adabere na ya. Ya mere mgbe anyị na-emeso ya dị ka ụfọdụ inspirational akụkọ, anyị nwekwara ike ịkwụsị ụma na-eme na nke ahụ bụ Christianity. Anyị nwekwara ike ghara ọbụna-eji Bible n'ihi na. Nke ahụ abụghị ihe Pọl bu n'uche ma ọ bu n'obi. Na ọ bụ ihe ókè nke dị nsọ ederede na-emeso ya na ụzọ.
The Christian okwukwe dabeere n'ihe News. Ọ na-dabeere na mkpọsa nke ozi ọma banyere ndụ, ọnwụ, na mbilite n'ọnwụ Kraịst.
Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị eziokwu, mgbe ahụ nkwusa Pọl bụ n'efu. Ọ bụghị nanị na, ma okwukwe Onye Kraịst ahụ bụ n'efu. Gịnị ka m na ikwere na, ma ọ bụrụ na akụkọ nke Jesus adịghị enwe ezi ogwugwu? E nwere bụ naanị akụkọ ọjọọ. Na na na onye mmehie, Jesus gbalịrị ime ihe banyere na, ma n'ikpeazụ ọnwụ nwetara ya
Ya mere, ọ bụrụ na ọ emeghị ka, ọ dịghị Good News.
Ma ebe ọ bụ na o welie, e nwere Good News
E nwere Good News! The ozi ọma bụ eziokwu. Anyị nwere ike weghachiri eweghachi Chineke. Achọrọ m ịgụ akwụkwọ ị mbụ amaokwu ole na ole nke 1 Ndị Kọrịnt 15.
Ugbu a, m ga na-echetara gị, ụmụnna, nke ozioma m kwusara ozi ọma gị, nke ị natara, na nke ị na-eguzo, na nke i na-azọpụta, ọ bụrụ na ị jisie okwu m ezisara unu-ma ọ bụrụ na unu kwere n'efu. N'ihi na m nyefere gị ka nke mbụ dị mkpa ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dị ka Akwụkwọ Nsọ, na e liri, na a kpọlitere ya n'ụbọchị nke atọ dị ka Akwụkwọ Nsọ, na na qọ pụtara n'ihu Sifas, mgbe ahụ ka mmadụ iri na abụọ. Mgbe ahụ, ọ pụtara n'ihu ihe karịrị narị ụmụnna ise n'otu mgbe, ọtụtụ n'ime ha ka nọ ndụ, ma ụfọdụ adawo n'ụra. Mgbe ahụ, ọ pụtara n'ihu Jems, mgbe ahụ ndịozi niile. N'ikpeazụ ha nile,, dị ka otu nnwụchu keomumu, ọ pụtara n'ihu m.
1 Ndị Kọrịnt 15:1-8
Jizọs nwụrụ maka mmehie anyị. O we bilie maka mmehie anyị. Nke ahụ bụ akụkụ nke Gospel akụkọ. Nke ahụ bụ oké ozi ọma n'ihi mmehie.
Eziokwu ahụ bụ na Jizọs si n'ọnwụ bilie-egosi ihe niile o kwuru banyere Chineke na banyere onwe ya. Nke ahụ bụ ihe stampụ ozi ya. Nke ahụ bụ na-ekwu na ọ dịghị ọzọ ndú nke okpukpe ọ bụla nwere ike ma ọ bụ ga-eme ka.
Ị na-ahụ na a ozi ọma dị nnọọ mkpa iji Paul na ọ na-ekwu ma ọ bụrụ na ọbụna na akụkụ nke ọ bụghị eziokwu, mgbe ahụ nkwusa ya bụ n'efu. Chee echiche banyere chọọchị ị na-aga on Sunday. Ọ bụrụ na mbilite n'ọnwụ abụghị eziokwu ga na-emetụta ha ikwusa ozi ọma mgbe niile? Ị na ọbụna anụ banyere ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kraịst na otú ọ na-emetụta ndụ anyị?
Nke a Mbilite n'ọnwụ emetụta ndụ gị. Ọ dị mkpa n'ihi na ị n'ihi na ndụ bụ ike. Mmehie dị adị n'ezie. Ọrịa dị adị. Ọnwụ bụ ezigbo. Nke ọ bụla ozi ọma anyị? Na-atọ na ọgwụgwụ? E nwere ozi ọma. Jesus ndị nwụrụ anwụ bilie. Ọ na-aga na-eme ka ihe niile dị ọhụrụ. Ili ahụ tọgbọ chakoo na-egosi na nkwa ya bụ ezi.
Ka anyị nọgide na-ekwu okwu banyere ibuana
II. Ọ bụrụ Christ emeghị ka ndị nwụrụ anwụ, e nweghị mgbaghara
M na-aga na-agụ ụfọdụ random lyrics banyere mgbaghara.
"Onyenwe anyị, gbaghara ya, ọ na ha ọchịchịrị agha na ya / ma ọ na a ezi omume-akpata n'ihi na-emehie. "
"Onyenwe biko gbaghara m n'ihi na m sinnin '/ m na-ekwu na m na okokụre / Ma m na-ekpe ekpere tupu ya emee / Meenụ ka ụzọ ya anya ilekiri dị ka ha na-egwuri egwu m ogologo ọkpa."
J. Cole, The Ọkụ Up
"Biko m na-gbaghara / nke ọ bụla ọjọọ mkpebi m mere / Kwa nwanne m egwuri / kpatara na m ka na paranoid isi ruo taa / Ma ọ bụ ọ dịghị onye si kpatara m mere mkpebi m mere / Nke a bụ ndụ m họọrọ, ma ọ bụ kama, ndụ ahụ họrọ m "
"M na-agbalị ka hà na m dị iche iche ma n'ikpeazụ anyị na-niile ahụ / m ikpegara Chineke ekpere, nna-agbaghara a n **** m agaghị agbarapụ mgbanwe. "
"Abụ m onye mmehie, onye bụ ma eleghị anya agbarapụ mmehie ọzọ / Jehova gbaghara m, Jehova gbaghara m / n'ihi na ihe m na-adịghị aghọta. "
Onye ọ bụla ji gbaghara. Ọbụna ụmụ okorobịa ndị doro anya na ha adịghị bu n'obi na n'ezie na-agbanwe agbanwe. Onye ọ bụla chọrọ ka a gbaghara.
Anyị Mkpa Mgbaghara
E nwere ihe bụghị a mmadụ na ebe a onye bụ onye zuru okè. Anyị niile bụ ndị na-ezughị okè na anyị mere mmehie. Sin bụ ndị dị otú ahụ a na-ewu ewu okwu. Mgbe ụfọdụ anyị na-ahọrọ softer okwu dị ka flaws, ma ọ bụ ezughị okè, ma ọ bụ emehie, ma okwu "mmehie" agwa ihe ọzọ ụfọdụ karịa ndị ọzọ okwu. Mgbe Bible kwuru okwu banyere mmehie ọ pụtara nupụrụ Chineke isi na omume gị, okwu gị, ma ọ bụ echiche gị. Ọ na-efu efu akara, ada ada mkpirikpi nke ihe Chineke chọrọ, aiming na-ezighị ezi akara, enupụrụ Chineke.
Na Bible na-ekwu na mmehie abụghị naanị random gbajiri iwu, ma na ọ bụ mmehie ha nupụrụ isi iji kpọmkwem na Chineke n'onwe ya. Chineke na-mmehie onwe, dị ka a onye agha na ya na ịdị mma ya, amamihe, na ebube. N'otu ụzọ ahụ ị ga-ewere onye na-ere ụlọ gị ala, bụghị nanị dị ka onye agha na ụlọ gị, ma on gị onwe gị, Chineke na-ọ bụla nupụrụ isi site o kere eke dị ka onye agha na ya. E nweghị ihe ọ na ọ dịghị nwere. Sin bụ ime mpụ megide ezi Chineke. Na na otu Chineke ahụ bụ Onyeikpe nke na anyị ga-eguzo n'ihu.
A bụ m ajụjụ maka gị: Ị na-atụ anya ka a gbaghara mmehie ndị ahụ? Gịnị mere? Gịnị mere a ezi-ikpe mgbe ka mmehie kwụsịrị nko n'ihi na ndị dị otú ahụ a heinous mpụ dị ka mmehie? Ọma nanị ụzọ na Chineke na-agbaghara mmehie bụ ma ọ bụrụ na ọ na-ama na e-akwụ ụgwọ maka. Na e nwere naanị otu onye na-ikọdọhọke iji kwụọ ụgwọ maka mmehie, Jesus. Na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs bụ ihe àmà na na ugwo a nabatara.
Na nmehie nile unu
Otu n'ime ihe Pọl kwuru banyere ma ọ bụrụ Jesus na a kpọliteghị bụ: "Okwukwe gị bụ ihe efu na ị ka na-na nmehie nile unu."
Ihe ọ pụtara ịbụ na nmehie nile unu, bụ na ị ga-akwụ maka ha. Ọ pụtara na ha na-ka na na gị ndekọ. Ọ pụtara na ị na-ka nọ n'agbụ nye ha. Ọ pụtara na ị bụghị napụtara ha. Ọ pụtara na ị na-agaghị agbaghara ha. The mgbaghara mmehie na-adabere na nke aru kwughachi dika mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst.
The cross bụ ebe Jizọs meriri nmehie. Nke ahụ bụ ka mgba egwuregwu na mmehie na ihe ọjọọ. Na ọ bụrụ na Jizọs eketaghị elu, nke ahụ pụtara mmehie merie.
Okpukpe ndị ọzọ na-adịghị eme ihe na mgbaghara mmehie. E nweghị nkowa maka ihe mere a ezi-ikpe ga-eleghara ha. Na-adaba Eluigwe na-eme n'obi karịa ọjọọ, ma ihe banyere ihe ọjọọ? Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-aja a ọkàikpe ka na-egbu ọchụ kwụsịrị nko n'ihi na ha nyeere otu agadi nwaanyị ahụ gafee okporo ámá na-esote ụbọchị. Sin nwere na-akwụ ụgwọ maka.
Ị na-achọghị-eguzo n'ihu Chineke na nmehie nile unu. E nwere ihe abụọ ebe ị pụrụ, na Christ ma ọ bụ na mmehie gị.
Na ọ bụrụ na Jizọs emeghị ka, e nweghị mgbaghara.
Ma ebe ọ bụ na o welie, e nwere mgbaghara mmehie!
Jizọs mere ka a otutu okpukpe ụdị ara n'ihi na, bụghị naanị na ọ na-agwọ ndị mmadụ, ma ọ nọ na-agwa ha-agbaghara ha mmehie. Jesus ama ikike ịgbaghara mmehie. The pope adịghị nwere na ikike, ndi ozuzu aturu na-adịghị na ikike, nchu-àjà na-adịghị na authority- naanị Chineke. Na Jizọs bụ Chineke nke nọ n'anụahụ.
Ka uche nke okwu mgbaghara. -Ekwu enyi m ụra m na ihu. Ọ ga-abụ mgbaghara ma ọ bụrụ na m kwuru na ọ bụ ok, ma zubere maakwa ya ụra azụ maka ya mgbe e mesịrị. Mgbaghara adịghị nnọọ pụtara na m anabata ya ma rịọ mgbaghara,, ọ pụtara na m na-akwanyere ya dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-emehie m. Ugbu a, m nwere ike mkpasasị uche na ọbọgwụ mgbe ọ bụla ọ na-aga n'ihi a elu ise. M ghara ịtụkwasị ya obi n'otu, ma M gaghị na mmehie megide ya. M ga-agbalị na-azụ ya, ma ọ bụ na-elu ilu kwupụta ya. Mmekọrịta anyị nwere ike weghachiri eweghachi.
Sin bụ oké iwe megide Chineke. Ọ bụ otú ahụ dị oké njọ ya, na ọ gaghi-dị nnọọ ileghara ya. Ọ maara na ọ ah h. Na Chineke hụrụ anyị n'anya nke ukwuu nke na ọ na zitere Jizọs. Na Jesus hụrụ anyị n'anya nke ukwuu nke na ọ dị njikere ime na ntaramahụhụ site cross anyị. Nke ahụ bụ ihe cross bụ. Ọ bụ Jizọs na-abata n'ụlọ na-ewere ǹtàràmahụhụ ahụ mmehie kwesịrị.
Ọ bụ dị ka m n'ụlọikpe ahụ na m n'ụzọ doro anya ikpe mara, ma kama ya ahụhụ onye na-ewe nke na ntaramahụhụ maka m.
The uru mgbaghara bara
Mgbe anyị tụkwasịrị obi Christ Chineke eweghachi mmekọrịta ya na anyị. Ọ ga-ehichapụkwa anyị ndekọ dị ọcha. Ọ bụ a mkpebi nke ọ bụghị ikpe mara site na Onyeikpe nke eluigwe na ala. Ọ ga-anabata anyị n'ime ya enyi. Ọ gaghị mmehie anyị imegide ayi.
Ndị Rom 4:7-8 -ekwu, "Ngọzi na-adịrị onye mmebi iwu gbagharawo, na onye mmehie na-ekpuchi; nāgara nke-nwoke megide onye Jehova na-agaghị gụọ mmehie ya. "
E nweghị ọzọ emenye ụjọ niile nke Eluigwe na Ala karịa eguzo n'ihu Chineke na nmehie nile unu. Ma ọ dịghị ka ukwuu ngọzi n'eluigwe na ala, karịa ka Chineke gbaghara.
Ọtụtụ mgbe, Ndị Kraịst nwere a aha ndị ọzọ nke ịbụ onye na ezi omume. Na m na-eche na nke ahụ bụ ihe mwute. N'ihi na definition nke ịtụkwasị Kraịst bụ ihe dị nnọọ iche nke onwe ezi omume. Ọ na-ekweta na anyị enweghị ezi omume. Na-abịa ka Chineke na okwukwe, na ya ga-agbaghara anyị nke anyị ajọ omume. Ya mere, ọ bụrụ na Ndị Kraịst echiche na-ezighị okwukwe gị, amara na ha. Nke ahụ abụghị ihe Kraịst kụziiri
Ị chọrọ ike ịgbaghara gị mmehie? Achọrọ m ka ị na-eche banyere ndụ gị. E nwere ọtụtụ ihe anyị mere na-adịghị nri. Anyị na-na-aghara ya ụgha, na anyị na-na lusted. Ọtụtụ n'ime anyị fornicated na enwetatụbeghị mmanya na-egbu. Ọtụtụ n'ime anyị zuru na ghọgburu. Ọtụtụ n'ime anyị asị ndị ọzọ, anyị na-umengwụ, na na ndepụta nwere ike ịga n'ihu. Anyị niile. Ndụ anyị mejọọ a nsọ Chineke. Na m na-eche ma ọ bụrụ na ị na ogologo ka a gbaghara mmehie ndị ahụ.
The Good News bụ, na mgbaghara dị na Jesus Christ. Kama ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ọ si n'ọnwụ bilie. na naanị, ma ọ bụrụ na anyị kweere na ndụ, ọnwụ, na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs.
Ka anyị tụlee ikpeazụ mmetuta
III. Ọ bụrụ Christ emeghị ka, ọ dịghị ndụ ebighi ebi
Ọ bụla otu n'ime anyị maara na e nwere ihe nke ahụ abụghị nri gbasara ọnwụ. Mgbe anyị na-aga ili ozu, e nwere mgbe piñata na confetti. E nwee mwute. E nwere anya mmiri. E nwere ihe na-ọṅụ dị ka nke ọma usọrọ ndụ ha. Ma mgbe anyị na-eche banyere ọnwụ, e nwere ihe a ọtụtụ nke mwute abuana. N'ihi na ọnwụ ka njọ. Ọ bụ na-ekwekọghị n'okike.
Anyị na otú eji na-ọnwụ, na o yiri ka o nnọọ otu n'ime ndị mere eme anyị ga-emeso. Ma nke a kwa bụ ihe mere mgbe nmehie batakwara n'ime uwa. Ọnwụ na-eme n'ihi na anyị na mmehie. Ọ bụghị nri. Na gwụla ma anyị na-na na na a oge nke miri emi nkoropụ, dịghị onye n'ime anyị anya n'ihi ọnwụ. Anyị chọrọ ịdị ndụ.
Ì chere na ị na-aga Eluigwe mgbe ị nwụrụ? Ọtụtụ n'ime anyị na-eche nke Eluigwe dị ka ebe mara mma, ebe ndị ikwu anyị na-aga mgbe ndụ dị n'elu. Na anyị dị ka olileanya anyị ruru ebe ahụ. Na na-eburu, na mgbe anyị na-anwụ, nke ahụ abụghị ọgwụgwụ. Ọma Pọl na-ekwu, ma ọ bụrụ na e nweghị mbilite n'ọnwụ, mgbe ahụ na ọ dịghị ihe.
"Mgbe ahụ, ndị dara n'ụra Kraịst alawokwa n'iyi. Ọ bụrụ na Christ anyị nwere olileanya nanị ná ndụ a, anyị bụ nke mmadụ niile kwesịrị ebere karịa. "
Na e nwere ndị na ha n'anya na m anwụọla, yiri anyị. Paul na-ekwu okwu banyere Kraịst na ha maara bụ ndị nwụrụ. Na Paul na-ekwu ma ọ bụrụ na ihe Jizọs mere abụghị ebili, mgbe ahụ, ha dị nnọọ n'iyi. Ha na-mere. Ọ dịghị mgbe ebighị ebi ya na Chineke.
Ọ aga ọbụna n'ihu ikwu, ị ga-emere Ndị Kraịst. Ị kwesịrị ị na-eche ihe ọjọọ n'ihi na anyị.
Gịnị Mere Anyị Ji e kwesịrị imere ebere?
Ugbu a ọtụtụ ndị na-eche na nke Kraịst dị ka ihe na ebe ị dị nnọọ na-aga chọọchị mgbe ụfọdụ, enweghị usoro, ma eleghị anya, ị na-echeta ekpere nke Onyenwe anyị, adịghị aghọta ihe mere Pọl ga-ekwu nke a. N'ihi na n'uche ha, naanị ihe Ndị Kraịst na-n'ezie adịkwa bụ Sunday. Ma na-eso Kraịst bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Christ pụtara na anyị nile. Ọ rịọrọ maka ihe niile. Ọ na-ajụ na anyị dina ndụ anyị ala. Na anyị na- anyị cross. Na anyị na-ewu ndụ anyị gburugburu ya. Ma ọ bụrụ na ọ mere n'ezie bilie, anyị na-na nzuzu. ọmịiko anyị. N'ihi na ihe niile anyị mere bụ atụfu ndụ anyị pụọ n'ihi na ọ dịghị ihe mere.
Ọ bụrụ Christ emeghị ka, ọ dịghị ndụ ebighi ebi.
Ma ebe ọ bụ na o welie, e nwere ndu ebighi-ebi!
N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya, na o nyere ya na Ọkpara, ka onye ọbụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi.
E nwere ndu ebighi-ebi. Ị nwere ike a ga-akpọlite. Na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ya na Chineke. Ndị Kraịst adịghị e kwesịrị imere ebere. Ndị Kraịst nwere ndị nwere olileanya gafee ili. Gịnị ka ị pụrụ ime iji a onye na-adịghị atụ ọnwụ egwu? Paul bụ a oké ihe atụ nke a na Filipaị 1. Ọ bụ ezi na ọnwụ n'ihi na ọ pụtara na ọ na-akawanye na-aga na Jizọs.
Otú ahụ ka i Atụghị egwu na Paul nwere? Na ọ bụ nanị na-abịa site onye na a tụkwasịrị eziokwu nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs.
Na mkpokọta: Ee. Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na Jesus bilie. Ma o bilie. Akụkọ ya yiri ndị ọzọ na na ọ nwụrụ anwụ. Onye ọ bụla na-anwụ anwụ. Ma ọ bụghị onye ọ bụla bilie. Jesus bilie. O kwere nkwa na ọ bụrụ na anyị na Ya anyị onwe anyị ga-esi na-emefu anyị mgbe ebighị ebi na ya. Ị tụkwasịrị ya obi?
Paul • April 18, 2014 na 11:47 Abụ • zaghachi
Daalụ, Pastor Lee. “Jizọs bụ Onye ahụ Chineke zitere iji weghachi, na kpọmkwem na-agbaghara anyị Onye kere anyị. Nke ahụ bụ ozi ọma.” Nke ahụ bụ ozi ọma! The confetti akụkụ mere ka m na-achị ọchị. Ị nwere a pụrụ iche n'echiche nke ọchị mgbe ị-ekwusa ozi ọma. Ọ dị mma.
Evan • April 18, 2014 na 2:14 pm • zaghachi
N'anya ịpụ iche ị na-etinye na Christianity dịghị mgbe ọ dị ukwuu na ndị okpukpe ndị ọzọ mara na anyị bụ nanị ndị nwere ike ikwu na anyị nwere onye nzọpụta na nwụrụ na bilie ndụ, ọ bụ ebe a na-arahụ na n'otu oge ahụ gaa kwadebe a ebe anyị
CynthiaAghomon • April 18, 2014 na 6:27 pm • zaghachi
Jesus bụ ihe niile n'ezie…e nweghị Kraịst na-enweghị Jesus na ndụ agaraghị apụta na olileanya na-adịghị na-enweghị Ya n'obe, ọnwụ na mbilite n'ọnwụ. M ekpe ekpere a otutu anya ga-emeghe ka eziokwu nke a dị ebube.
aha: VulcanYouth » Easter!!
JacobAlger • April 20, 2014 na 8:11 pm • zaghachi
Man Njem, ekele maka nkekọrịta. Nke a bụ otu ike ozi. M na-a kwere ekwe kemgbe m bụ nwa ewu ma chọpụtara na m na-arịọ nke a ajụjụ dị nnọọ nke a Ista. Ozi gị na Pọl na-akụzi na-eme ka ya otú doro anya. M na-ekele gị n'obi na ozi gị, ngọzi m Dude!
Mario A. Ramirez • April 22, 2014 na 4:04 Abụ • zaghachi
N'ihi nnukwu oge dị egwu
Didi • April 22, 2014 na 7:22 Abụ • zaghachi
Gbaghara m maka ngwa ngwa, ma mgbe ị na-agbanwe aha si na-etu ọnụ na onyenwe m wuru na-etu ọnụ? Ọzọkwa, magburu onwe ibe on n'ókè nke Ista!
TAREKcReSTIK • Ka 20, 2014 na 8:27 pm • zaghachi
EE njem, Enwere m ajụjụ, whatre echiche gị na ememme ngabiga na Bible n'oriri?
Greg • November 3, 2014 na 7:58 pm • zaghachi
M nnọọ ekele maka gị òkè nke Okwu Chineke! Nke a post-agba m ume immensely. Ọ na-a super ike ka Jesus’ mmeri na n'ihu nke uche m. Ọ na-fọrọ nke nta ka a afọ kemgbe m nwanne m nwoke nke 17 yrs nwụrụ. Na a flash Chineke, we were ndu ya site na ihe yiri a ngụkọta mberede na ekwesịghị mere. M nọrọ ọtụtụ afọ na ya; ndụ m nile a gbanwere na nnukwu ụzọ mgbe–ọ bụ ike kwere na m na-abịa na ịbụ tọrọ ya mgbe ahụ. M ga-ahụ ya ọzọ? O ga-ebili?
M bịara a post n'ihi na m nnọọ ume gị song “Lazarus.” Ị na-na na-agọzi m nnọọ, na m ga na-ekele gị maka na-ekerịta eziokwu dị omimi na, n'ihi na a kpọlitere Jizọs na merie ọnwụ, Amaara m na m ga-ahụ Ya ihu na ihu…na nwanne m nwoke oke. M na-atụ ị na-ume na-!
aha: La Sagrada Familia, #CrossEqualsLove | Kween
Sammy • October 15, 2016 na 11:34 Abụ • zaghachi
akụkọ a dị omimi na niile akụkọ ihe mere eme na-adabere na nke bu eziokwu na emere ka Kraist si na ndị nwụrụ anwụ …
niile ndị amụma ndị ọzọ ahụtụbeghị ìhè nke ụbọchị kemgbe ha wee isii ụkwụ miri ….
500 àmà abụghị ihe nnọọ ileghara anya … -asị a bloke ka jay z nwụrụ ma mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ọ bịara azụ ndị nwụrụ anwụ !!!!
na media washout ga-enwe oke mba???
ma ihe bụ ohere na 500 pepo ga na-agba àmà ihe omume a dị ka ọ na eketịbede ???
ma ọ bụrụ na Kraịst e si n'ọnwụ kpọlite ​​were ubi ụbọchị ndị Juu ikike ga-ama !!!!
na ramifications ga-ịrịba …
Christianity ga-abụ ihe kasị nkwulu okpukpe na planet dịghị???
ma ebe ọ bụ na anyị maara otú akụkọ na-agwụ anyị nwere olileanya na ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-akpọlite ​​na nke ahụ bụ ihe karịrị ozi ọma!!
JNote • Ka 3, 2017 na 1:07 pm • zaghachi
njem nwoke, Chukwu gozie gị! Na-ege ntị gị okwuchukwu na ozizi na music, maa abọli m. Na ozi ọma, Oziọma, na nke ahụ bụ ihe ndị mmadụ mkpa ndụ ọzọ mgbe na obi dị m ụtọ ịhụ gị na-eme ya nwoke. N'ileghachi anya na otú Chineke na-eji gị, na-enyere m otutu ebe anyị na-eme ọtụtụ nke otu stof, musically na-ekwusa ozi ọma, wee na-asị ee Chineke nwoke, M na-ekpe ekpere ka unu.